Nephi ne Mprɛtse, no gu mu ahorow ebien: mprɛtse nkakraba na mprɛtse akɛse. Dza odzi kan no fa sunsum mu ndzɛmba na nkɔnhyɛfo no, hɔn somdwuma na hɔn nkyerɛkyerɛ na hɔn dwumadzi ho. Na dza odzi do no so yɛ nkorɔfo a wɔrekã hɔnho asɛm no ho abakɔsɛm (1 Nephi 9:2–4). Ofi Mosiah n’aber do na wɔdze mprɛtse akɛse no so aka ndzɛmba a sunsum mu ndzɛmba etsitsir wɔ do no ho.
Mormon ne Mprɛtse, iyi so yɛ Nephi ne mprɛtse akɛse do nsɛm a Mormon etwitwa do esinesin, na ɔakã ho nsɛm pii so. Dɛm mprɛtse yi do na yebohu abakɔsɛm a Mormon kyerɛwee no no nsɔwdo na dza ne ba Moroni so dze kãa ho.
Ether ne Mprɛtse, iyi so kã hɛn Jaredfo ho abakɔsɛm. Moroni twitwaa nsɛm no do esinesin na ɔdze nankasa nedze kekãa ho na ɔkyerɛɛw ber no mu abakɔsɛm na ɔkãa bɔɔ mu na ɔtoo no dzin “Ether Nwoma”.
Ayewa Mprɛtse no Lehi no nkorɔfo dze fi Jerusalem bae wɔ afe 600 a nna wonnyaa nnwoo Christ no. Dza ɔwɔ yinom do nye “Moses no nwoma enum, … na Jewfo hɔn kyerɛwsɛm fitsi ahyɛse, … dze kɛpem ber a Judahfo hɔn hen Zedekiah hyɛɛ n’ahendzi ase no; na nkɔnhyɛfo krɔnkrɔn hɔn nkɔnhyɛfo” (1 Nephi 5:11–13). Kyerɛwsɛm pii a ɔwɔ mprɛtse yinom do a ɔfa Isaiah na nkɔnhyɛfo a hɔn edzin wɔ Bible mu nye hɔn a hɔn edzin nnyi mu no so ho nsɛm wɔ Mormon Nwoma no mu.
Mormon Nwoma no gu mu ahorow anaa nkyekyɛmu etsitsir duenum, a wɔfrɛ kor biara nwoma a, ɔtɔdɛ hɔn a wɔkyerɛwee no ne dzin na ɔda do, gyedɛ no mu kor pɛr. No mu dodow a odzi kan (nwoma no mu esia a odzi kan dze kɛpem Omni no) wɔkyerɛɛ ase fii Nephi ne mprɛtse nkakraba no do. Nwoma a ɔwɔ Omni na Mosiah ne ntamu no, wɔdze dza wɔfrɛ no Mormon ne Nsɛm no ahyɛ hɔ. Dza wɔdze ahyɛ ntamu hɔ no toa kyerɛwsɛm no a woekrukye wɔ mprɛtse nkakraba no nye dza ɔwɔ mprɛtse akɛse no do a Mormon twitwaa do esinesin no do.
Dza ɔwar koraa a ɔhyɛ ase fi Mosiah dze kɛpem Mormon tsir 7 no yɛ Nephi ne mprɛtse akɛse no a Mormon twitwaa do esinesin a wɔakyerɛ ase no. Dza odzi ewiei a ɔhyɛ ase fi Mormon tsir 8 dze kesi nwoma no n’ewiei no Mormon ne babanyin Moroni na okrukyee. Ɔno na ber a otwitwaa n’egya ne bra mu nsɛm kyerɛw no, otwitwaa Jaredfo abakɔsɛm do esinesin wiei (dɛ mbrɛ ɔyɛɛ Ether nwoma no) ekyir no ɔdze dza wɔfrɛ no Moroni nwoma no kãa ho.
Bɛyɛ mfe 421 a wɔwoo Christ n’ekyir no mu, na Moroni a ɔyɛ Nephifo hɔn nkɔnhyɛnyi a odzi ekyir—abakɔsɛm kyerɛwfo no sɔɔw kyerɛwsɛm krɔnkrɔn no ano na ɔdze kosumae maa Ewuradze, ama woeyi no wɔ nda a odzi ekyir no mu, dɛ mbrɛ Nyankopɔn nam Ne tsetse nkɔnhyɛfo do kãe no. Wɔwoo Christ n’ekyir, wɔafe 1823 mu, na dɛm Moroni kor yi ara, a nna ɔasoɛr efi ewufo mu no kɛseraa Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith na oyii mprɛtse a woekrukye no maa no.
Dza ɔfa nwoma kor yi ho: Asɔpɔkan dzin krataafa a, odzi dza ɔwɔ mu krataafa no enyim pɛɛ no, woyii fii mprɛtse no mu na ɔkã kyerɛwee krɔnkrɔn no ho. Mbueienyi no a ɔammfa akyerɛwamba soronko annkyerɛw, tse dɛ 1 Nephi na dza odzi Mosiah tsir 9 enyim pɛɛ no no so kã kyerɛwee krɔnkrɔn no ho. Mbueienyi horow a wɔdze akyerɛwmba soronko akyerɛw, tse dɛ tsir ne tsir nsɛm no, nnkã asɔpɔkan kyerɛwee no ho mbom ɔyɛ adzesũa mboa a wɔdze akã ho ama akenkan aakɔ do yie.
Mfomdo nkakramba binom akɔ do wɔ nkaano Mormon Nwoma a woetsintsim no Ngyerisi Bɔrofo kasa mu no. Nwoma yi na ɔatsentsen dza ɔfata a ɔdze no mu nsɛm nye dza asɔpɔkan nwoma a Nkɔnhyɛnyi Joseph Smith yɛɛ mu nsesae ana woritsinstim no asaa.
Ɔmmfa Dza Ɔwɔ Mu no
Ase nsɛnsin, ankorankor nsɛnsin, anaa ɔfa dza ɔwɔ mu biara nnyi hɔ.